Walter Samuel Oo Ka Caawiyay 10 Ciyaaryahan Oo Inter Milan Ah Inay Garaacaan AC Milan. - jornalizem
Walter Samuel Oo Ka Caawiyay 10 Ciyaaryahan Oo Inter Milan Ah Inay Garaacaan AC Milan.
Inter Milan oo inta badan 10 ciyaaryahan ku ciyaareysay qeybtii labaad ayaa 1-0 ku dubatay AC Milan ciyaar xiiso badneyd oo ka dhacday garoonka San Siro.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay jawi kacsan iyadoo Milano ay ku kala qeybsan tahay labada kooxood, waxaana ciyaarta sidoo kale soo xaadiray taageere gaar ah oo Milan ah Mario Balotelli, inkastoo uu hore ugu soo ciyaaray Inter.
Inter Milan ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 3aad markii laad xor ah oo uu soo tuuray Cambiaso uu shabaqa geliyay daafaca Nerazzurri Walter Samuel.
Labada kooxood ayaana fursado qatar ah isweydaarsay ilaa iyo daqiiqadii 39aad markaas ay dhacday arin muran dhalisay, markii goolhayaha Inter Handanovic uu kubad ka dul feeray madaxa Emanuelson, waxaana iyadoo goolhayaha uu dhulka jiifo shabaq faaruq ah kubad cusjiyay Montolivo, laakiin garsooraha ayaa goolkaas diiday isagoo qalad ka dhigay ciyaaryahanka reer Holland Emanuelson.
Waxaana qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay goolkaas ay hogaanka ku heysay kooxda Nerazzurri.
Qeybtii labaad ayaa Nagatomo jaalihiisii labaad loo taagay ka dib markii uu kubad gacanta ku taabtay iyadoo qeybta labaad ay socoto kaliya seddex daqiiqo, waxaana Inter ay ku ciyaareysay wixii halkaas ka danbeeyay 10 ciyaaryahan.
Handanovic ayaana labo fursadood oo qaali ah ka badbaadiyay qeybihii hore ee qeybta labaad Montolivo.
Pazzini oo bedel ku soo galay ayaa u soo dhawaaday inuu Milan u barbareeyo daqiiqadii 75aad markii karoos ka yimid Robinho oo ku dhacay afaafka hore ee goolka uu lugta la waayay.
Daqiiqadii 82aad ayaa Milan ay ku dooday in rigoore loo dhigo ka dib markii Pazzini uu kubad si fiican ugu dhex bixiyay Robinho, iyadoo Samuel uu u muuqday mid qalad ku galay Robinho. Laakiin garsooraha ayaa jaale ku siiyay Pazzini ku dooditaankiisii in rigoore loo dhigo kooxdiisa.
Inter ayaana guul taariikhi ah ka gaartay kooxda ay xafiiltamaan ee AC Milan, iyadoo Nerazurri ay guushaas gaartay iyadoo 10 ciyaaryahan ku ciyaareysay inta badan qeybta labaad ee ciyaarta.
Inter ayaa ku jira kaalinta 4aad waxaana ay leeyihiin 15 dhibcood, iyagoo ku dhibco ah kooxda kaalinta 3aad ee Lazio, waxaana ay afar dhibcood u jiraan kooxaha hogaanka haya ee Juventus iyo Napoli.
Dhanka kale Napoli ayaa weli ku dhibco ah kooxda hogaanka heysa ee Juventus ka dib markii ay 2-1 kaga talaabsadeen kooxda Udinese oo marti ugu aheyd San Paolo.
Marek Hamsik iyo Pandev ayaa labada gool u kala dhaliyay Napoli, halka goolka kaliya ee Udinese uu ka yimid ciyaaryahan Pinzi.